Hiran State - News: Madaxweynaha Somaliya oo beesha caalamka si weyn ugu canaantay hadagdaamada ay ku hayaan dalka Somaliya
Madaxweynaha Somaliya oo beesha caalamka si weyn ugu canaantay hadagdaamada ay ku hayaan dalka Somaliya
Mogdisho: (hiranstte.com)- Madaxweynaha Somaliya oo maanta ciidmada xooga dalka hortooda ka qudbeeyey ayaa si weyn u weeraray siyaasadaha guracan oo ay dalka Somaliya ku hayaan wadamo dano gaar ah ka leh dalka iyo dadka Somaliyeed. ilaa hada shirka Kenya oo maanta furmay qodobada laga hadlayo lama yaqaano waxaana meel goyni ah lagu soo xirtay qaar shacabka Somaliyeed ka mid ah waa yaabe shir ay madaxweynahii iyo xukumadii dalka ka jirtay qaadacday natiijada ka soo bixi karta maxey tahay halkeeyse ka shaqeyn doontaa ayuu yiri wariye ku sugan madasha shirka oo loo diiday inuu wax ka ogaado arimaha Shirka.
Waxaa kale oo ayaan daro ah in saxaafada Somalida loo diiday iney wax ka ogaadaan arimaha shirka, taasina waxey cadeyn u tahay in shirku yahay mid dano iyo siyaasado gaar ah laga leeyahay.
Aduunyada ceeb kama ahan in uu damac ka galikaro Qeyraadka dalka Somaliya laakinse ilaa herkan in shacabka lala gaaro oo heer ay gaajo ugu dhintaan qeybo dalka ka mid ah ma ahan wax aqliga gali kara. waxaan shaki ku jirin hadii aysan arimahan oo kale Somalidu u midoobin in kuwa hada shirka ka qeyb galay iyaguna ay marqaati ka noqon doonaan in kuwo kale mustaqbalka la buun buunin doono si iyagana loo bahdilo.
Siyaasad waa lagu kal aaragti duwanaan karaa laakinse shirkaan waxaa si weyn ugu fashilmay siyaasadii gudoomiyaha baarlamaanka iyo inta ku fikirka ah mar hadii uu shir ay madaxweynahii iyo xukumadii dalka ka jirtay diidey ay tageen.waxaa isweyn leh sida isgane hadii uu berito madaxweyne dalka ka noqdo loola shaqeyn doono oo loogu hogaansami doono markiisa. Gudoomiyaha barlamaanka shirkaan waxaa laga yaabaa iney ka aheyd ku xumee madaxweynaha iyo wasiirka 1aad oo uu ka dhaxeeyey qilaaf dalka gudahiisa lagu xalin karay laakinse qaranka Somaliya ayuu meel ugu dhacay xaqiiqadii oo calankii iyo jiritaankii umada Somaliyeed ayuu hoos geeyey nin isagu noloshiisa ka raadsada rabshadaha wadanka ka jira ayey tiri hooyo Somaliyeed oo ka mid ah qaxootiga Somaliyeed ee ku nool dalka Kenya oo magaceeda ku soo gaabisay Cadar.
Dadka siyaasada Somaliya mudada ku soo dhax jirayse waxey leeyahiin gudoomiyaha dhaqso ayuu dib ugu laaban doonaa si uu xildhibaanada baarlamaanka uga qanciyo ujeedadii uu uga qeyb galay shirka Kenya iyo waxa laga hadlayey.
Xaqiiqadii sida uu madaxweynaha Somaliya ka dhawaajiyey Somalida ayaa looga baahan yahay iney dantooda gartaan oo ay aayahooda ka tashadaan oo shirweyne gudaha ku qabsadaan, sidaasi ayaa xalka rasmiga ah. dalka Rwanda, Uganda iyo wadamo badan oo uu safar ku soo maray ayuu u xaqiijiyey iney iyagu arimahooda xalisteen kedib markii ay ku jahwareereen fara galin shisheeye sidaasi oo kale looga baahan yahay shacabka Somaliyeedna.
Xog rasmi ah oo dad wax gal ah naga soo gaareyso ayaa aad u dhaliilayso gudoomiyaha baarlamaanka oo isagu halka uu shirka ka qeyb galay bedelkeeda ay qiyaasayeen inuu arinta dhax dhaxaad ka noqdo oo ugu yaraan xooga saaro in shirkaasi dhawr maalmood dib loo dhigo inta ay madaxweynaha iyo xukumada oo go,aan isku mid ah ka qaatay shirkaasi arintooda meel laga saarayo. laakinse waxey hada u muuqataa in madaxweynahii wadanka iyo xukumadii ay wada shaqeynta kala dhaxeysay uu kala saftay wakiil uu isaga ka sareeyo darajo ahaan ileen gudoomiyaha barlamaanka waa astaantii shacabka Somaliyeed u taagneyd oo baarlamaanku waxuu metelaa shacabka Somaliyeede.
La soco wararkeena danbe iyo siyaasadaha ka curtay dalkeenii hooyo oo ilaa hada aduunyada laga waayey dowlad ay ku qanacsan yahiin. dhibaatada kale ee aan indhaha laga qabsan karin waa in qeybo ka mid ah dalka Somaliya meelaha miyiga ah ay diyaarado ka soo duulay maraakiib badweynta Hindiya fadhiya ay ku soo degaan gudaha wadanka kedibna intey Ugaarta dishaan dhawr saac iska jooga dhulka oo aysan jirin cid yac ka dhihi karta waayo maraakiibtaas waxey hubka iskugu dhiibaan dowlada iyo mucaaradkeeda si ay dalka intiisa kale ugu mashquuliyaan inuusan gaarin nidaam dowladeed oo shaqeynaya.
· admin on April 12 2011 15:50:44 · 0 Comments · 1902 Reads ·
14,581,363 unique visits